Traduci braccialetti in Birmano con esempi contestuali
Hai cercato la traduzione di braccialetti da ItalianoaBirmano
orecchini, braccialetti, veli
နားသန်သီး၊ လက်ကောက်၊ မျက်နှာဖုံး၊
ti adornai di gioielli: ti misi braccialetti ai polsieuna collana al collo
လက်ကောက်နှင့်လည်ဆွဲအစရှိသော တန်ဆာ မျိုးကို ဆင်စေ၏။
Si udiva lo strepito di una moltitudine festante di uomini venuti dal deserto, i quali avevano messo braccialetti ai polsieuna corona di gloria sul loro capo
ပျော်မွေ့လျက် နေသောလူအလုံးအရင်း မြည်သံကိုလည်း ကြားရ၏။အခြားသောသူအများတို့နှင့် အတူ တောကလာ၍၊ လက်၌လက်ကောက်၊ ခေါင်း၌ တင့်တယ်သော သရဖူကို ဆောင်းသော သေသောက် ကြူးတို့လည်း ပါကြ၏။
Per questo portiamo, in offerta al Signore, ognuno quello che ha trovato di oggetti d'oro: bracciali, braccialetti, anelli, pendenti, collane, per il rito espiatorio per le nostre persone davanti al Signore»
ထိုကြောင့် ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ အသက် အဘိုးကို ဖြေဘို့ ရာ လူအသီးအသီးရသော ရွှေတန်ဆာ၊ လည်ဆွဲ၊ လက်ကောက်၊ လက်စွပ်၊ နားတောင်း၊ နှာခေါင်း ဆွဲဘူးတို့ကို ထာဝရဘုရားအား ပူဇော်လျက် ဆောင်ခဲ့ ပါပြီဟု လျှောက်ဆိုလျှင်၊
Egli infatti, visti il pendenteei braccialetti alle braccia della sorellaeudite queste parole di Rebecca, sua sorella: «Così mi ha parlato quell'uomo», venne da costui che ancora stava presso i cammelli vicino al pozzo
သူသည်နှာဆွဲကို၎င်း၊ နှမလက်၌ လက်ကောက် ကို၎င်း မြင်၍၊ ထိုယောက်ျားသည်ကျွန်ုပ်ကို ဤသို့ ပြောသည်ဟု၊ နှမရေဗက္ကဆိုသော စကားကို ကြားသော အခါ၊ ရေတွင်း၌ ကုလားအုပ်အနားမှာရပ်နေသော ယောက်ျားထံသို့ ရောက်သောအခါ၊
Quando i cammelli ebbero finito di bere, quell'uomo prese un pendente d'oro del peso di mezzo sicloeglielo pose alle nariciele pose sulle braccia due braccialetti del peso di dieci sicli d'oro
ကုလားအုပ်များကို ရေသောက်စေပြီးသော နောက်၊ ယောက်ျားသည်၊ အချိန်ငါးမူးရှိသော ရွှေနှာဆွဲ၊ အကျပ်တဆယ်အချိန်ရှိသော ရွှေလက်ကောက်တရံကို ထုတ်၍၊
E io la interrogai: Di chi sei figlia? Rispose: Sono figlia di Betuèl, il figlio che Milca ha partoritoaNacor. Allora le posi il pendente alle nariciei braccialetti alle braccia
ကျွန်ုပ်ကလည်း၊ သင်သည် အဘယ်သူ၏ သမီးဖြစ်သနည်းဟုမေးသော်၊ သူက၊ ကျွန်ုပ်သည် မိလခါ ဘွားမြင်သော နာခေါ်သားဗေသွေလ ၏သမီးဖြစ်သည် ဟုပြောဆို၏။ ကျွန်ုပ်သည် မိလခါဘွားမြင်သော နာခေါ် သားဗေသွေလ၏သမီးဖြစ်သည်ဟုပြောဆို၏။ ကျွန်ုပ် သည်လည်း၊ သူ၏ မျက်နှာ၌နှာဆွဲကို၎င်း၊ သူ၏လက်၌ လက်ကောက်တို့ကို၎င်းထည့်ပြီးလျှင်၊
you go back now (Vietnamita>Inglese)wide narrow (Inglese>Tagalog)a) perutusan pengerusi (Malese>Inglese)pasa' sa katawan (Tagalog>Inglese)ukiachilia (Swahili>Inglese)流利的用英语和别人聊天 (Cinese semplificato>Inglese)happy birthday my dear sister (Inglese>Hindi (indiano))retold (Inglese>Tagalog)nipples (Svedese>Inglese)travel far enough you meet yourself (Inglese>Hindi (indiano))patrick (Inglese>Curdo)länsirannikolla (Finlandese>Vietnamita)jis din meaning (Inglese>Hindi (indiano))r u alone now (Inglese>Portoghese)mother's maiden name (Inglese>Tagalog)di na ginagamit na bagay (Tagalog>Inglese)mag papaayos (Tagalog>Inglese)inosinmonofosfatdehydrogenase (Danese>Inglese)variabilit�� (Italiano>Francese)vaska lingvo (Inglese>Spagnolo)methi pouder (Inglese>Italiano)io sono il tuo eroe (Italiano>Inglese)vogterens (Danese>Spagnolo)trimenon (Tedesco>Inglese)aaaa (Estone>Tedesco)